नेपाल आज | फेवाताल किनारमा त्यो रात
कला साहित्य साहित्य आज पर्यटन समाज
शनिबार, २३ चैत २०७५ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
राति ८ बजे फेवाताल किनारको फुटट्रयाकमा हिँडिरहेको थिएँ । त्यहाँ रहेका झन्डै दर्जन विश्रामकक्षमध्ये कुनै एकमा बस्ने जमर्को थियो । तर, सबै भरिभराउ । एक्लै किनारमा बसेर फेवाताललाई नियाल्ने धोकोमा कत्रो तुषारापात ! मन खिन्न भयो । खुला आकाशमुनी बस्ने अवस्था थिएन । पुसको चिसोमा सितले कहाँ दया देखाउँछ र ?
सबै विश्रामकक्ष नियालिसकेको थिएँ । प्रायमा किशोर–किशोरी एकअर्काको अंगालोमा बेरिएर बसेका थिए । केहीमा भने युवा र युवतीको आ–आफ्नै समूह थियो । उनीहरुप्रति मैले दुई धारणा बनाएँ । पहिलो, उनीहरु शैक्षिक यात्राका लागि पोखरा आएको हुनुपर्छ भन्ने र दोस्रो घुम्न आएका वा स्थानीय प्रेमी–प्रेमिका अथवा श्रीमान्–श्रीमती हुनुपर्छ भन्ने । तर, नियाल्दा श्रीमान् श्रीमती कम र प्रेम जोडी नै बढी देखिन्थे ।
झन्डै १० मिनेट अधेरी रातको फेवाताल र त्यस किनारमा दाउरा बालेर सेकुवा पोलिरहेका होटलेहरुको तस्बिर कैद गर्नमा नै बित्यो । नजर भने विश्रामकक्ष तिरै थियो । कोही उठ्ला र बस्न पाउँला भन्ने आशमा ।
नभन्दै प्रतिक्षाको घडी समाप्त भयो । केटीहरुको एउटा समूहले मेरा लागि स्थान खाली बनाइदियो । म हतारहतार गएर खाली विश्रामकक्षमा आफ्नो कब्जा जमाएँ । तर, मेरो इच्छा र चाह भने फेरिएको थियो । फेवाताल पढ्न र महसुस गर्न गएको म, अब त्यो पक्षमा थिइनँ । ध्यान मेरो अगाडि–पछाडि एकअर्काको अंगालोमा बेरिएका र ओठहरु जोडिरहेका प्रेम जोडिमा थियो ।
हुन त काठमाडौंमा यस्ता दृश्य कैयन पटक देखिसकेको छु । फेवाताल किनारमा पनि पहिलोपटक यस्तो चित्र देखेको होइन । जतिपटक पोखरा जान्छु, म यी दृश्यबाट परिचित भएरै फर्कन्छु । तर, कहिल्यै उनीहरुलाई गहिरो अध्ययन गर्ने इच्छा जागेन । जसरी यसपटक जागेको छ ।
मध्य रातमा फेवाताल किनारमा प्रेम साट्ने उनीहरु भाग्यमानी भएको ठहरसहित म आफैलाई धिक्कारिरहेको छु । मसँग पनि कोही साथमा भइदिएको भए ? मन फेवातलबाट आइरहेको बतासे सिरेटोसँगै रोमाञ्चित छ । तर, मलाई मीठो भ्रममा तरंगित भएर बहकिनु थिएन । बरु रमाउनु थियो अर्कैको प्रेम सन्तुष्टीमा ।
म उनीहरुका हरेक गतिबिधि नियालिरहेको थिएँ, टोलाइरहेको थिएँ । त्यत्तिकैमा दुई युवती आएर मै बसेको विश्रामकक्षमा बिराजमान भए । दुवैले पालैपालो मलाई नियाले अनि आफ्नै धुनमा गफिन थाले । थाइकट कपाल भएकी अन्दाजी १९ वर्षीया एक युवतीले हाते झोलाबाट केही निकाली । क्यान वियर रहेछ । मलाई हेर्दै दुवैले पिए । अर्की अन्दाजी २२ वर्षीया युवतीले चुरोट सल्काई । चुरोट पनि पालैपालो दुवैले पिए । धुवा फैलिएर मसम्म आइपुग्यो । उनीहरु पहिलोपटक चुरोट पिइरहेका छन् या भर्खरै पिउन थालेका हुन्, मैले अनुमान लगाएँ । किनकी चुरोट पिउने उनीहरुको तालमेल कत्ति मिलेको थिएन । अर्को चुरोट सल्काउँदासम्म उनीहरुले चुरोटलाई कम र चुरोटले आफूले आफूलाई बढी पिइरहेको थियो । फेरि सबै धूवाँ बाहिर उडिरहेको थियो, कति चुरोटको ठूटाबाट त कति उनीहरुको मुखबाट ।
उनीहरु ब्वाइफ्रेन्ड र धोकाको कुरा गरिरहेका थिए । सानो स्वरमा बोलेकाले मैले राम्रोसँग सुनिरहेको थिएन । कान ठाडो भने पारिरहेँ । २२ वर्षीया युवतीले ‘तँलाई धोका दिएर त्यसले ठीक गरेन’ भनेको मसिनोगरी सुनियो । १९ वर्षीया युवती भनिरहेकी थिई, ‘मलाई बाँच्नै मन छैन यार ।’ बल्ल मैले चाल पाएँ उनीहरु ‘गम’ मेट्नका लागि रक्सी र चुरोट पिइरहेका छन् भन्ने ।
हामी बसेको भन्दा दुई स्टेप अघिल्लो विश्रामकक्ष खाली भइसकेको थियो । उनीहरु त्यतै सरे । मेरो मनमा विभिन्न प्रश्नहरु खेल्न थाले । फेरि एकपटक अघिल्लो विश्रामकक्षमा चुम्बन गरिरहेको जोडितर्फ नियालेँ । मनमनै आफैसँग प्रश्न गरेँ, ‘भोलि ऊ पनि यसैगरी यहाँ आउने छे अनि वियर र चुरोटसँग विछोडको पीडा साट्नेछे ।’ फेरि कामना गरेँ, ‘तर, यस्तो नहोस् । उनीहरुको प्रेम सफल होस् ।’
फेवाताल किनारमा बसेर पहिलोपटक मुड अफ भइरहेको थियो । रातमा फेवाताललाई महसुस गरेर केही लेखुँला भनेर गएको थिएँ । तर, मन र मस्तिष्क दुवैमा चक्काजाम भइदियो । उसलाई कसले र के कारणले धोका दियो ? मनमा यही कुरा खेल्न थाल्यो । के ऊ साच्चीकै मर्छे त ? प्रश्नमाथि प्रश्न खेलिरहेका थिए । धेरैबेर त्यहाँ बस्न मन लागेन । उठेर होटलतिर लागेँ ।
बाटोमा त्यसैगरी हात समाएर हिँडिरहेका कैयौँ जोडी भेटिए । अरुबेला पनि नदेखेको होइन । तर, यसपटक भने उनीहरुको अनुहारमा पनि उही १९ वर्षीया युवतीको तस्बिर पाएँ । एकोहोरिँदै कतिबेला होटलको कोठामा पुगिसकेछु । सुत्नुअघि निस्कर्ष निकालेँ, ‘हुन त आजभोलि यस्ता तस्बिर जताकतै छरिएर रहेका छन् ।’